http://www.asgisa-ec.co.za/documents/asgisa_icp_leaflet_xhosa_aug_09 by SMG - issuu
eastern cape Umzimvubu: Amathuba omhlaba
I-AsgiSA EC linyathelo elikhawulezayo lokwabelana ngokukhula kwezoqoqosho neliyinzuzo kubantu. Eyona njongo yayo yokusekwa ibikukukhawulezisa utshintsho kulimo ngeenkqubo ezintandathu ezinempembelelo enkulu ebalulekileyo, ezijoliswe kuqala kummandla woMlambo Umzimvubu Basin. Lo mmandla ungumfanekiso omhle, ochume ngendalo kunye nezinto zenkcubeko ubandakanya iidolophu ezifana nooMthatha, Gcuwa, Dutywa, Elliotdale, Qumbu, Mount Ayliff, Mount Frere, Lady Frere kunye neCofimvaba. Inabantu abangaphezulu kwesigidi esi-1, 3 ubukhulu becala abaphila phantsi kwentlupheko. Kwezi nkqubo zintandathu, ezimbini zazo ziyakhawuleziswa- ezolimo kunye nokulungiswa kwemveliso kwezolimo nakwimfuyo (agro-processing) kunye namahlathi.
I-AsgiSA EC ineenkqubo ezintandathu ezinempembelelo enkulu ebalulekileyo: Ezolimo kunye nezokulungiswa kwemveliso kwezolimo nakwimfuyo: Apha kulawulwa iiyunithi ezisisigidi semfuyo kwaye kucetywa ukunkcenkceshelwa umhlaba wolimo ongangeehektare ezingamashumi amane amawaka (40 000ha) kunye neehektare ezingamakhulu amahlanu amawaka (500 000ha) zomhlaba olinywayo ongankcenkceshelwayo, kujoliswe ekuveliseni ukutya kunye nezityalo zamashishi emveliso kulungiswa imveliso kwezolimo nemfuyo (agro- processing) kunye namafutha enziwe ngezityalo nezilwanyana (bio- fuel). Ukuphuhliswa kwamahlathi: Kuphuhliswa iihektare ezingamawaka amakhulu (100 000ha) zamahlathi amatsha, kuphuculwe ulawulo lwamahlathi akhoyo kunye nokuveliswa kwamathuba akhawulezayo kushishino lwemithi. Ukuphuhliswa kwezibonelelo zamanzi: Ukwandisa amathuba okufumana amanzi eMzimvubu Catchment njengenqwelo yotshintsho kwezolimo- imimandla emayiqwalaselwe ibandakanya ukusetyenziswa kwezigidi ezingamakhulu asithandathu anamashumi anesine m3 (640m3 )zamahlathi, ezolimo, ukusela kwemfuyo, amanzi asebenza emakhaya nakwimizi mveliso kwimimandla engqongileyo. Amandla ombane aveliswa ngamanzi (hydropower) kunye nezinye iindlela zokuzisa umbane: Ukwenziwa kombane okhuselekileyo oliwaka namakhulu amahlanu MW (1 500 MW), kumbane ophinda usetyenziswe. Ukuphuhliswa kwezokhenketho: Ukunxulumanisa ezoqoqosho kunye nokhenketho kunxweme lwaseWild Coast kwaneendawo ezibalulekielyo eMazantsi eeNtaba zoKhahlamba kwindlela yokhenketho oluphawulweyo ethi iquke indawo kaMandela yokuzalwa kunye neziko lemiboniso yembali eseMthatha. Ukusombulula iipatheni zendawo zokuhlala ezisisigxina emaphandleni nasezidolophini kunye nokuveza ngokutsha ezoqoqosho kulo mimandla kujoliswe kuyo.
INKQUBO EHLANGENEYO YOLIMO I-AsgiSA EC, ingalo karhulumente wephondo, yasungulwa ukuze incedisane nophuhliso kweliphondo nakwiziphaluka zalo, enye yaza yayisaya kubizwa nje nge-Transkei. Ezona zinto ezimisele ukuziphuhlisa i-AsgiSA EC, ukupheliswa kwendlala nokucuthwa kwentswela ngqesho phambi kokuba kufike unyaka ka2014, kwingingqi yase-Transkei, apho abantu abangange 1,3 million baphila phantsi kwemeko zentlupheko. Izahlulo ezisithandathu zamahlelo okuphuhlisa ze-AsgiSA EC, enye yazo luphuhliso lolimo nemihlaba, lona elicandelo lijongene nokubonakalisa isakhono nobutyebi bomhlaba lwalwe ngigqi ehlala inamathuba emvula namanzi. Ezo zizinto ekudala zikhona iminyaka emininzi kule ngingqi, zizakuncedisa nokupheliswa kwendlala nokuphuculwa kwesithethe solimo. Lombono wolimo oludityanisiweyo, ubonisa ulimo lwezityalo ezitshintshanayo kumafama ekudala esebenza ngokulima umbona, ukwaveza nesivuno esingcono, ukwandisa izityalo kwakunye nengeniso engcono. Lombono ukwathwele nokutshintshwa kotyalo lombona, lutshintshana notyalo lwembotyi ezomileyo, isoya, i-Sunflower, i-Canola nezinye imveliso ze-biofuels. Ezinye izityalo eziquka umsebenzi omkhulu wezolimo zezi •	Izityalo ezityalekayo kumhlaba owomileyo (umbona, isoya, i-canola ne-Sunflower) • Iziqhamo •	Iintyatyambo Uhlelo lokukhethwa kwe-prokjeti 1. Ii-projekti ezikhethwayo zikhethwa ngokubhekiselwe kuncedo lobuchwepeshe, uluntu oluzimiseleyo futhi nokuvumelana ngendlela yotyalo mali oluqhubekayo. 2. Isicwangciso soshishino seminyaka emihlanu, futhi imveliso ihlelwa ngokophuhliso olubonakalisa impumelelo. Ukomelela I-AsgiSA EC ikwajongene nezinye imeko zolimo nge model- ebizwa ngoba yiAgribusiness model ukuze kuphuculwe ukomelela kolimo lomhlaba owomileyo. Izinto eziphambili ekomeleleni kolimo kuquka: • Ovimba needlela • Ubungakanani bomhlaba owomileyo nobukho bawo - bubekuma kwamakhulu amathathu eehektare (300ha) kwindawo evelisayo. • Ukujongana nexabiso elikhulu lokuvelisa kumhlaba ungazange walinywa, ngakumbi kumaxesha amathathu okuvelisa okokuqala. • Izakhono kwi mveliso emgangatho uphucukileyo. • Ukuncediswa kwamafama, nokongezelelwa kwawo.
Haga-Haga Khamanga Bay
N2 ibonisa ezinye zezinto, ukuba imali efunyenweyo ikhuselwa njani kulungiselelwa umjikelo olandelayo wemveliso: Le modeli
Isixa sesivuno ngokweengxowa
Intlawulo yokuqesha/uluntu Ingeniso Ingeniso eyabiwayo
Ukuqeshwa kwekhontrakhi kunye nolawulo
I-AsgiSA EC ukwandisa nokuphinda kutyalwe
Ngolwazi oluthe vetshe qhagamshelana no: Chuma Sangqu UMlawuli wobaBandakanyekayo kunye neNkuthazo kuTyalo mali
043 735 1673 chuma@asgisa-ec.co.za
Thukela Mashologu UMlawuli wezoLimo kunye nokuLungiswa kweMveliso kwezoLimo neMfuyo
043 735 1673 thukela@asgisa-ec.co.za
EMthatha: ECDC House, 7 Sissons Street, Fort Gale, Mthatha 5100 t 047 531 0103 | f 047 501 5110 EMonti: Arundel Park, Unit 2 & 3A, 12 & 14 Old Transkei Rd, Stirling, East London 5247 t 043 735 1673 | f 086 544 7581 Postnet Suite 385, Private Bag X 9063, East London 5200
Enye yengxaki ezibanzi ezijongene namafama asezilalini kukuba awanalwazi nge-ndawo ezizizo ekuthengiswa kuzo izityalo, futhi awanabo ovimba abasulungekileyo ukuze baxhamle kumaxabiso atshintshayo. Ngenxa yoko, amafama anyanzeleka ukuba awutshitshise umbona ngokukhawuleza emva kokuba ewuvunile, futhi kusukube kukho ingeniso emandla yombona kwindawo ekuthengiswa kuzo. Yonke lonto inyanzela amafama ukuba athengise ngexabiso eliphantsi. I-AsgiSA EC, nge-modeli yayo yoshishino kwezolimo incedisana nawo amafama ekuthengiseni imveliso yawo. Umzekelo, i-AsgiSA EC izakuqwalasela intengiso yombona nge ndawo ekuthengiswa kuzo njenge-farm co-operatives kunye nenkampani zemveliso. Ikwanjongene nendlela ekuzakugcinwa ngazo umbona, apho i-AsgiSA EC izakutyala imali ekuthengweni koovimba. Loonto ke iyakuvulela uluntu ngokubanzi ukuba luvelise umbona ngokuhleliweyo. Okunye ezakukwenza kukuqinisekisa ukuba uluntu lwasezilalini lunombona de kufike ixesha elizayo lesivuno.
IIPROJEKTHI ZONKCENKCESHELO Iihektare ezingamawaka asithandathu namakhulu asithandathu anamashumi asixhenxe eehektare (6 670ha) zalinywa kunyaka mali ka- 2008/09 kwaye iintsapho ezingamawaka amabini namakhulu amahlanu (2 500) zaxhamla apho. Iihektare ezingamashumi alithoba anesihlanu samawaka (95 000ha) zabelwe ukusetyenziswa kule minyaka mihlanu izayo. Ingakumbi amanzi angasetyenziswayo kwiindawo ezilungileyo kuMmandla woPhuhliso loMzimvubu ziyaqwalaselwa. Ihektare ezingamashumi amabini (20ha) kwenziwa iprojekthi yemifuno kwaye ukwandiswa ngekhulu elinamashumi amabini yeehektare (120ha) eHighbury kuyaphunyezwa kwaye kujoliswe kumanzi akuMlambo uMthatha angasetyenziswayo. Iihektare eziliwaka (1 000ha) zemveliso yeziqhamo ezifana neorenji (isitrasi) iyasetyenzwa ilungiswa ePort St Johns. Iprojekthi yenziwa ngentsebenziswano phakathi kweNdibaniselwano yoPhuhliso kumaShishini eMveliso kwaye ibandakanya umasipala wasekhaya kunye neenkokheli zasekuhlaleni. Iprojekthi yonkcenkceshelo elingwayo ibandakanya ukuvuselela iCala (ummandla waseKomani) kwimveliso yeepesika. Le projekthi iyakwandiswa ukuqinisekisa ngeefama ezishishinayo. Indlela yokuhambisa iipesika, kubandakanywe indlela yelifa leChris Hani (indlela iSabalele), iCofimvaba kunye neCala, iyacwangciswa.